ပုဂံဘုရားအမှတ် (၆၆၄) ရှိ နံရံဆေးရေးပန်းချီများတွင် လွှဖြတ်ရာများတွေ့ရ၍ လုံခြုံရေးကိစ္စများက?? - Yangon Media Group
ပုဂံဘုရားအမှတ် (၆၆၄) ရှိ နံရံဆေးရေးပန်းချီများတွင် လွှဖြတ်ရာများတွေ့ရ၍ လုံခြုံရေးကိစ္စများက??
ပုဂံဘုရားအမှတ်(၆၆၄)ရှိ နံရံဆေး ရေးပန်းချီများတွင် လွှဖြတ်ရာများ တွေ့ရသဖြင့် ပုဂံဒေသတွင် လုံခြုံ ရေးကိစ္စများကို အဓိကထားဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့် ရှေးဟောင်း ဝတ္ထုပစ္စည်းများဖြစ်သော နံရံဆေး ရေးပန်းချီများကို ဖျက်ဆီး၊ ခိုးယူပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ် ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခွဲ)မှ သိရသည်။ ယင်းနံရံဆေးရေးပန်းချီများကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ‘ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ’ အရ အရေးယူခံရမည် ဖြစ်သည်။
”လွှနဲ့ တိုက်တာဆိုတော့ ခွာပြီးတော့ ယူမယ့်သဘောပေါ့။ ခွာပြီးယူလို့မရအောင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း တွေ ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ ဒီဘုရားမှာရှိတဲ့ နံရံဆေးရေးပန်းချီ အတွက်သာမက အခြားဘုရားတွေမှာရှိတဲ့ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေ အတွက်လည်း လုံခြုံရေးကိစ္စကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီးတော့ အခြားလုံ ခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လုံခြုံရေးတွေ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ တင်ပြထားပါတယ်။ ညောင်ဦးခရိုင်ကိုတင်ပြထားပြီး သက်ဆိုင်ရာပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိပါတယ်” ဟု ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခွဲ)မှ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးအောင်အောင်ကျော်က ပြောသည်။ နံရံဆေးရေးပန်းချီများသည် ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဖြစ်သော ကြောင့် ဥပဒေဖြင့်အခိုင်အမာ ကာ ကွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။
”ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖျက်ဆီးရင် အရေးယူနိုင်တယ်။ အရေးယူတယ်။ ဥပဒေထဲမှာလည်း အခိုင်အမာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ရှေးယခင်ကတည်းက ပုဂံ ဒေသရှိ နံရံဆေးရေးပန်းချီများကို လွှဖြင့်တိုက်ဖြတ်၍ ခိုးယူကာ ပြည်ပသို့ရောင်းချခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံသား များက ပြတိုက်တွင် ပြသလိုသဖြင့် ဖြတ်တောက်ယူဆောင်သွားခြင်းများရှိကြောင်း နံရံပန်းချီကားများ အနီးတွင်နေထိုင်သော ပုဂံဒေသခံ များထံမှ သိရပြီး ပုဂံဘုရားများသည် အဆူအရေအတွက် ၃ဝဝဝ ကျော် ရှိသဖြင့် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲနေကြောင်း သိရသည်။
နံရံဆေးရေးပန်းချီများအပါအဝင် ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြည်ပသို့သယ် ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းများပြုပါက အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်မှ ဆယ်နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ်သိန်းငါးဆယ်မှ သိန်းတစ်ရာအထိ ဖြစ်စေ၊ ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သလို နံရံဆေးရေးပန်းချီများ အပါအဝင် ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကို မူလပုံစံပျက်ယွင်းစေခြင်း၊ ပျက်စီး ခြင်း၊ ရှာဖွေမှုပြုခြင်းများအတွက် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်မှ ခုနစ်နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်မှ သိန်းငါးဆယ်အထိဖြစ်စေ၊ ပြစ် ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင် ကြောင်း ”ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ’ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း သိရသည်။
Times City စီမံကိန်း မေလတွင် အစမ်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စမတ်ကတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေဟု ပြည်ထောင်စု ဝန်??
ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိ ရေနံမြေ လယ်သမားများ ပုံစံ(၃) ရရှိပြီးသော်လည်း လယ်မြေများ လက်ဝယ် မရရှိသေ
သရက် – ကံမ ကားလမ်းတွင် အိမ်ထောင်ပြောင်းယာဉ် နောက်ပြန်လျှောကျကာ သစ်ပင်ကို တိုက်၊ သုံးဦးသေဆု
အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် လှည့်လည်၍ ??
ရွယ်တူ ကစားသမားများတွင် အလီ အကောင်းဆုံးဟု ပိုချက်တီနို ချီးကျူး